Badikwe yeyokosa abahlali koQQ | News24
LAST UPDATED: 2019-05-21, 10:51
Badikwe yeyokosa abahlali koQQ
Abahlali bengingqi oQQ baqale uqhankqalaza phambi kwepasika ngelithi bafuna iinkonzo eziquka amagumbi angasese namanzi. Funda ibali elipheleleyo kwiphepha lesithathu. UMFANEKISO: SIYABONGA KALIPA
Ukunqongophala kwamagumbi angasese, iimpompo zamanzi kunye nombane, le yeminye yemiceli mngeni ejamelene nabahlali bendawo yamatyotyombe oQQ, eSite B. Kungokunje bathi kwanele.
Kwiphulo lokuvakalisa ukungaxoli kwabo aba bahlali bathe bavala izitalato kulamandla bememelela kuceba wabo ukuba angenelele. Batshise inkunkuma emgaqweni kuquka nomgqomo ogcina inkunkuma.
Aba bahlali batyhola ngelithi emva kokukhala kuceba wabo uMonde Nqulwana ukuba abaphathele iziphatha mandla zesixeko saseKapa akukenzeki oko.
Batyhola ngelithi iimeko abaphila phantsi kwazo zimbi kakhulu emva kweminyaka engamashumi amathathu behlala kule ngingqi. Bathi izindlu zangasese abazisebenzisayo zimbalwa, lonto ibangela ukuba zingakwazi ukumelana nomthamo wabahlali. Umhlali uSikho Lerumo uthe balwela iinkonzo kuba bedikwe yimeko abahlala phantsi kwayo.
“Sidikiwe yindlela esihlala ngayo apha, kwaye kudala sithenjiswa kodwa akhonto yenzekayo,” utshilo uLerumo. Wongeze ngelithi babekwathenjiswe ngokususwa kule ndawo kodwa akukenzeki oko.
U-Lerumo uthe abanye babo baye banyanzeleke ukuba baye kuzinceda ngakuhola wendlela uN2, ntoleyo ayichaze njenge nobungozi. Ngenxa yoku uthe abanye abahlali baye babhenele ekuhlawuleni imali kwimizi ekufutshane ukuze bazincede.
Uthe kwaye uninzi lolutsha kulendawo aluphangeli.
Omnye omnye umceli mngeni kukuba uninzi lolutsha aluphangeli kwaye akukho nanye into abancedisa ngayo ukuphucula impilo zabo.
“Sizakuqinisekisa ukuba akuvotwa apha ekuhlaleni kuba sidikiwe kukonyula abantu abangasenzeli nto,” utshilo omnye wabahlali uMbongeni Mkalipi.
Uthe kwiSixeko saseKapa iyaziwa imeko abaphila phantsi kwayo kuba kudala bekhala. “Asizuyeka ukuqhankqalaza side sibe sifumana impendulo kwaye asifuni mpendulo emva kolonyulo,” utshilo uMkalipi.
U-Phindile Maxiti, weSixeko saseKapa, uthe le ndawo imi kuyo le ndawo ngumhlaba ka Eskom kwaye inepali ezinobungozi.
U-Malusi Booi, ojongene nohlaliso loluntu kwikomiti yesigqeba ka sodolophu, uthe bayayazi ukuba le ngingqi kumele nayo yokhelwe izindlu nanjenge zinye ingingqi.
U-Booi uthe batyumbe iqela labantu lihlole ukuba kungenziwa njani ukuze kwakhiwe kule ndawo. Woleke ngelithi iSixeko sele sisuka kuyihlola le ndawo ukuzama ukufumana isisombululo. Kodwa ngenxa yendawo emi kuyo le ngingqi kunzima ukuba bafakela ezinye inkonzo. Uthembise ngelithi bazakwenza ngako konke abanako ukuhlangabezana nabahlali.
Usomlomo wamapolisa aseKhayelitsha Lowellan West uthe amapolisa aphanda matyala amabini okubethwa kwezithuthi nafakwe ngabaqhubi. Uthe bekungekabanjwa mntu kodwa amapolisa alubeke esweni oluqhankqalazo.